Gerbera 1.9 na -abịa na nkwalite nhazi, nkwado abawanye na ihe ndị ọzọ | Site na Linux
Gerbera 1.9 na -abịa na nkwalite nhazi, nkwado abawanye, na ndị ọzọ
Mwepụta nke ụdị ọhụrụ nke ihe nkesa mgbasa ozi Gerbera 1.9 nke emerela mgbanwe dị iche iche na ndozi mperi. N'ime mgbanwe ndị pụtara ìhè, anyị nwere ike kwuo na emezila nhazi, yana nkwado maka igwe onyonyo Samsung, n'etiti mgbanwe ndị ọzọ.
Maka ndị na -amaghị maka Gerbera, ha kwesịrị ịma nke ahụ Ngwa a bụ ihe na -aga n'ihu na mmepe nke ọrụ MediaTomb mgbe emechara mmepe ya. Gerbera na -akwado usoro UPnP, gụnyere nkọwa UPnP MediaServer 1.0 ọ na-enye ohere ịkwanye ọdịnaya ọtụtụ mgbasa ozi na netwọkụ mpaghara nwere ike ilele vidiyo ma gee ụda na ngwaọrụ UPnP ọ bụla dabara, gụnyere telivishọn, consoles egwuregwu, smartphones na mbadamba.
Ọ nwere ọgbọ akpaka nke vidiyo vidiyo na transcoding nke ọdịnaya na elu iji wepụta n'ụdị nke ngwaọrụ akọwapụtara.
Njikwa nnyefe na -eme site na ntanetị weebụ. A na -ewepụta metadata na -akpaghị aka na faịlụ mgbasa ozi wee mepụta nchịkọta dị maka ịgagharị site na ngwaọrụ niile nwere ihe nchọgharị weebụ. A na -enyocha akwụkwọ ndekọ aha na -akpaghị aka maka faịlụ ọhụrụ site na iji inotify ma ọ bụ nyocha emere. Enwere ike ibudata ozi ndị ọzọ gbasara ọdịnaya nke ọrụ last.fm.
1 Isi ihe ọhụrụ nke Gerbera 1.9
2 Kedu ka esi etinye Gerbera na Linux?
Isi ihe ọhụrụ nke Gerbera 1.9
Na ụdị ọhụrụ a E megharịrị koodu ahụ na nchekwa data nke wepụrụ koodu nketa iji mee ka ọ bụrụ ngwa ngwa yana idobe ya mfe. N'ihi nke a, ewepụrụ nkwado maka ogidi ndị merela ochie, nke pụtara na mgbe ị kwalitechara na 1.9.0, a na -akwaga ebe nchekwa data na enweghị ike iji ya na ụdị ochie.
Mgbanwe ọzọ dị mkpa nke pụtara na ụdị ọhụrụ a bụ nke ahụ Agbasawanyela nhọrọ nhazi, gụnyere ịkọwapụta akụrụngwa maka nbudata nka album, ịhazi profaịlụ DLNA, na ịgbanwe ntọala UPnP.
Na mgbakwunye, achọpụtara na etinyerela nkwado maka transcoding nhọrọ, nke a na -atụgharị vidiyo vidiyo naanị maka ụfọdụ ngwaọrụ ochie yana maka ndị ọhụrụ, a na -enye ya dịka ọ dị.
Anyị nwekwara ike ịchọta nke ahụ agbakwunyere nkwado maka igosipụta akpa ike, onye a na -agbakọ ọdịnaya ya n'oge mmeghe (dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike hazie ngosipụta faịlụ agbakwunyere ma ọ bụ gbanwere n'oge na -adịbeghị anya), na mgbakwunye cAkwalitela ndakọrịta na Samsung TV nke ukwuu.
N'ime mgbanwe ndị ọzọ na-apụta:
Ike ọchụchọ emelitere maka ngwaọrụ na ọdịnaya UPnP.
Emeziri mgbazi na nkọwa adịghị mma
Ebugharị mmelite akpa
Maka lastfm a gbanwere ya na C ++ API
A na -eme nhicha na koodu mmalite SQL
Agbakwunyere ụdọ profaịlụ DLNA yana akwụkwọ ndekọ aha faịlụ a na -ahụ anya na ntọala
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmatakwu banyere ụdị ọhụrụ a, ị nwere ike ịkpọtụrụ nkọwa ya Na njikọ na-esonụ.
Kedu ka esi etinye Gerbera na Linux?
Maka ndị nwere mmasị ịwụnye Gerbera na nkesa nkesa kachasị amasị ha, ha kwesịrị ịgbaso ntuziaka ndị a nke anyị kesara n'okpuru.
Ole ndị ka ha bụ ndị ọrụ Ubuntu, Linux Mint ma ọ bụ nkesa ọ bụla nke ewepụtara ma ọ bụ dabere Na Ubuntu, ị nwere ike iwunye site na ịgbakwunye ebe nchekwa ngwa na sistemụ gị. Iji mee nke a, naanị mepee ọnụ ma n'ime ya ka ha ga -ede ihe ndị a:
Maka ndị bụ ndị ọrụ Debian ma ọ bụ usoro ọ bụla nke a:
Ugbu a ọ bụrụ na ha bụ Ndị ọrụ Gentoo iwu nke ha ga -eji rụọ nrụnye bụ ihe a:
iputa -va net -misc / gerbera
Ma ndi diri ndị ọrụ Arch Linux, Manjaro, Arco Linux ma ọ bụ usoro ọ bụla nke Arch, ha ga -enwerịrị ebe nchekwa AUR ka ha nwee ike ịwụnye Gerbera. Iwu iji mee nwụnye bụ:
Maka ndị bụ ndị ọrụ openSUSE:
N'ikpeazụ maka ndị bụ Ndị ọrụ Fedora, ha nwere ike rụọ nrụnye site na ịpị iwu na -esonụ:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Gerbera 1.9 na -abịa na nkwalite nhazi, nkwado abawanye, na ndị ọzọ
Apache Cassandra 4.0 na -abịa na ndozi ọsọ, atụmatụ ọhụụ na ihe ndị ọzọ
PulseAudio15.0 na -eji nkwalite Bluetooth, nkwado, ndozi na ihe ndị ọzọ